Asetenam Nsɛm: Bere Nyinaa Som Adwuma wɔ Finland Atifi Fam | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Maya Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Yɛde Mfe 50 Ayɛ Bere Nyinaa Som Adwuma wɔ Finland Atifi Fam
Aili ne Annikki Mattila anom asɛm
Yɛka kyerɛɛ yɛn adamfo kwampaefo bi sɛ: “Wo de, w’awofo wɔ nokware no mu; wɔbɛboa wo, enti ɛnyɛ den sɛ wobɛyɛ ɔkwampaefo.” Ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ: “Yɛn nyinaa wɔ Papa biako.” Asɛm no kaee yɛn nokwasɛm yi: Yɛn soro Agya no hwɛ n’asomfo na ɔhyɛ wɔn den. Nea asi wɔ yɛn asetenam ma yehu sɛ asɛm yi yɛ nokware turodoo.
NA YƐNE yɛn awofo te akuraa bi ase wɔ Ostrobothnia atifi fam wɔ Finland. Na yɛyɛ mmofra du na ɛwɔ abusua no mu. Bere a Wiase Ko II no gyina mu no, na yesusua. Ná ɔko no mmɛn baabi a yɛte koraa, nanso yehuu ɛho nsunsuanso. Da bi wogyaee topae guu Oulu ne Kalajoki so, na wim yɛɛ kɔɔ. Yɛn awofo ka kyerɛɛ yɛn sɛ, sɛ yehu sɛ asraafo wimhyɛn reba a, yɛmpɛ baabi nkɔhyɛ. Saa bere no, yɛn nuabarima panyin Tauno ka kyerɛɛ yɛn sɛ bere bi bɛba a asase yi bɛdan paradise ma amanehunu nyinaa to atwa. Eyi kaa yɛn koma paa.
Tauno kenkan Bible Asuafo no nhoma, enti bere a odii mfe 14 na ohuu nokware no. Bere a Wiase Ko II pae gui no, nea na wasua afi Bible mu nti, wankɔ sraadi. Enti wɔde no kɔtoo afiase na wɔyɛɛ no ayayade wɔ hɔ. Ɛno koraa na ɛhyɛɛ no mpamden sɛ ɔnsom Yehowa. Enti bere a woyii no fii afiase no, ahokeka paa na ɔde yɛɛ asɛnka adwuma no. Yɛn nuabarima no nhwɛso hyɛɛ yɛn nkuran ma yɛkɔɔ nhyiam a na Adansefo no yɛ no. Saa bere no, na wohyia wɔ akuraa bi ase wɔ yɛn mpɔtam hɔ. Na yɛkɔ nhyiam akɛse nso. Na ɛsɛ sɛ yɛyere yɛn ho yɛ adwuma sie sika ansa na yɛatumi akɔ nhyiam no bi. Nea na yɛyɛ ne sɛ yɛpam ntade ma nkurɔfo. Afei na yedua gyeene, na na yɛtetew nnuaba. Yɛn afuw mu adwuma nti, na yɛn nyinaa ntumi mmom nkɔ ɔmantam nhyiam. Enti na ebi di kan kɔ, akyiri yi na ebinom nso akɔ.
Fi benkum: Matti (wɔn papa), Tauno, Saimi, Maria Emilia (wɔn maame), Väinö, (akokoaa), Aili, ne Annikki wɔ 1935
Yesuaa Yehowa ho ade huu n’apɛde na ɛma yenyaa ɔdɔ kɛse maa no. Enti yesii gyinae sɛ yebehyira yɛn ho so ama no. Yɛn baanu nyinaa bɔɔ asu afe 1947. (Na Annikki adi mfe 15 ɛnna Aili adi mfe 17.) Yɛn nuabea Saimi nso bɔɔ asu saa afe no ara. Afei yɛne yɛn nuabea Linnea suaa Bible, na ɔne ne kunu ne ne mma bɛyɛɛ Yehowa Adansefo. Yɛbɔɔ asu akyi no, yɛde sii yɛn ani so sɛ yɛbɛyɛ akwampaefo, enti na yɛtaa yɛ akwampaefo aboafo.
YEFII BERE NYINAA SOM ADWUMA ASE
Fi benkum: Eeva Kallio, Saimi Mattila-Syrjälä, Aili, Annikki, ne Saara Noponen wɔ 1949
Afe 1955 mu no, yetu kɔɔ Kemi wɔ atifi fam. Na adwuma a yɛyɛ gye yɛn bere pii nanso na yɛpɛ sɛ yɛyɛ akwampaefo. Nea na yesuro ne sɛ, sɛ yɛtew yɛn adwuma so bɛyɛ akwampaefo a, ebia na yɛannya sika anhwɛ yɛn ho. Enti yɛyɛɛ yɛn adwene sɛ yɛbɛpɛ sika kakra asie ansa. Ɛyɛ saa bere no na yɛne onuawa kwampaefo no bɔɔ nkɔmmɔ a yɛkaa ho asɛm mfiase no. Ɛno boaa yɛn ma yehui sɛ, sɛ yɛpɛ sɛ yɛde yɛn bere nyinaa som Yehowa a, ɛnsɛ sɛ yɛde yɛn ho to yɛn ankasa ahoɔden so anaa yɛn abusuafo so. Mmom ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ Yehowa ne yɛn soro Agya, enti ɔno na ɛsɛ sɛ yɛde yɛn ho to no so.
Yɛrekɔ nhyiam wɔ Kuopio, 1952. Fi benkum: Annikki, Aili, Eeva Kallio
Saa bere no na yɛasie sika kakra a ɛbɛso yɛn bosome abien. Enti May 1957 no, yɛkɔyɛɛ akwampae adwuma no bosome abien wɔ Pello wɔ Lapland mantam mu. Ɛwɔ Arctic Circle atifi fam. Yɛrekɔ nyinaa na yesuro sɛ anhwɛ yɛn ho bɛkyere yɛn. Nanso bosome abien soe no, na yɛmfaa yɛn nsa nkaa yɛn sika no mpo, enti yɛsan yɛɛ bosome abien kaa ho. Nanso bosome abien no baa awiei no, na yɛntew sika no so kaprɛ mpo. Afei de, na yegye di sɛ Yehowa bɛhwɛ yɛn. Yɛde mfe 50 na ayɛ akwampae adwuma no, nanso yɛn sika no da so ara da nea ɛda! Sɛ yebu kɔmpɔ hwɛ yɛn akyi a, ayɛ sɛ nea Yehowa aso yɛn nsa reka kyerɛ yɛn sɛ: ‘Munnsuro, na me ara mɛboa mo.’—Yes. 41:13.
Yɛde mfe 50 na ayɛ akwampae adwuma no, nanso yɛn sika no da so ara da nea ɛda!
Kaisu Reikko ne Aili nam asɛnka mu
Afe 1958 no, yɛn mansin sohwɛfo ka kyerɛ yɛn sɛ, sɛ yebetumi a anka yɛnkɔyɛ akwampaefo titiriw wɔ Sodankylä. Saa kurow no wɔ Lapland mantam mu. Saa bere no na onuawa biako pɛ na ɔwɔ mpɔtam hɔ. Ɔkwan a onuawa no faa so huu nokware no yɛ anika kwa. Na ne babarima ne ne sukuufo akɔ Finland ahenkurow Helsinki rekɔhwehwɛ hɔ. Bere a sukuufo no nam kurom no, onuawa panyin bi maa abarimaa no Ɔwɛn-Aban sɛ ɔmfa nkɔma ne maame. Abarimaa no de kɔmaa ne maame, na ɔkenkan wiei ara na ohui sɛ nokware no ni.
Yenyaa dan wɔ abansoro bi so, na na wɔpae nnua wɔ ase. Ɛhɔ ara nso na na yɛyɛ adesua. Mfiase no, na yɛn baanu ne onuawa no ne ne babea pɛ na yehyiam yɛ adesua no. Sɛ yehyia a, nea yɛyɛ ara ne sɛ, yɛkenkan nhoma a yɛresua dapɛn no. Akyiri yi ɔbarima bi a ɔne Adansefo no asua Bible bɛyɛɛ adwuma wɔ baabi a wɔpae nnua no. Ɔne n’abusua fii ase baa adesua no bi, na akyiri yi ɔne ne yere bɔɔ asu. Afei onua no na na ɔhwɛ adesua no so. Mmarima a wɔyɛ adwuma wɔ hɔ no bi fii ase baa adesua no bi, na akyiri yi wobegyee nokware no. Mfe bi akyi no, yɛn kuw no bɛdan asafo.
ASƐNKA ADWUMA NE EMU HAW
Na yetwa kwantenten ansa na yɛakɔka asɛm no. Edu ahohuru bere a, na yɛnantew anaa yɛtena sakre so ansa na yɛatumi anya nkurɔfo aka asɛm no akyerɛ wɔn. Ɛtɔ da bi mpo a yɛde hyɛmma na ɛkɔ. Sakre no boaa yɛn paa. Sɛ yɛrekɔ ɔmantam nhyiam oo, yɛkɔsra yɛn awofo oo, ɛno ara na na yɛde kɔ. Na yɛde sakre no twa kilomita pii ansa na yɛadu yɛn awofo hɔ. Edu awɔw bere a, yɛfa bɔs ahemadakye kɔ nkuraase kɔyɛ afie afie asɛnka adwuma no wɔ hɔ. Sɛ yewie akuraa biako ase a, na yɛanantew kɔ akuraa foforo ase. Na sukyerɛmma tumi tɔ kata akwan no nyinaa so. Sɛ ebinom afa kwan no so dedaw a, ɛnde ɛso fa nyɛ den efisɛ ɛyɛ a na ayiyi kwan ato mu; nea yɛyɛ ara ne sɛ yɛfa baabi a wɔafa no. Nanso sɛ sukyerɛmma san tɔ bio a na akata kwan a ayiyi ato mu no so. Afei nso efi March kosi May mu no, ɛyɛ a na sukyerɛmma no ayɛ mmerɛw dodo, enti wutu wo nan a, entu, nanso yɛde nkakrankakra fa mu saa ara.
Yɛreyɛ asɛnka adwuma wɔ awɔw bere bi mu
Edu awɔw bere a na yɛhyehyɛ ntade a ɛbɛma yɛn ho ayɛ yɛn hyew. Yɛka sɔks atenten a emu yɛ duru abien anaa abiɛsa bɔ so hyɛ na yɛde mpaboa tenten apii so. Nanso ɛno mpo no, sukyerɛmma kɔ yɛn mpaboa mu. Sɛ yedu ofie bi kwan ano a, yɛwɔrɔwɔrɔw yɛn mpaboa poroporow mu. Sɛ yɛnam sukyerɛmma no mu a, yɛn ntade ano nyinaa fɔw, na sɛ awɔw no ano yɛ den a, ɛnde ntade no ano tumi kyen sɛ ice block. Bere bi ɔbea bi ka kyerɛɛ yɛn sɛ: “Awɔw a ɛte sɛɛ a moafa mu abedu ha yi de, mitumi hu sɛ mowɔ gyidi paa.” Na yɛanantew bɛyɛ kilomita 11 (akwansin 7) na akodu hɔ.
Ɔkwan no tenten nti, sɛ ade sa yɛn akuraa bi ase a, na yɛtaa da nkurɔfo nkyɛn. Sɛ yehu sɛ ade rebɛsa a, na yɛafi ase rehwehwɛ baabi a yɛbɛda. Na nkuraa no asefo yɛ ahiafo nanso wɔpɛ nnipa na wɔn yam ye; wɔma yɛn aduan di ansa na yɛakɔda. Mpɛn pii no na yɛn kɛtɛ yɛ ɔwansan anaa sisi nhoma. Ɛwom ara a yenya dan a yetumi dwudwo yɛn ho wom. Da bi ɔbea bi de yɛn kɔɔ fie kɛse bi mu na ɔde ahɔhodan a ɛwɔ abansoro no so maa yɛn. Na wɔato mpa kama si hɔ retwɛn yɛn. Yɛkɔ baabi saa a, na yɛtaa ne fie hɔfo bɔ Bible mu nkɔmmɔ ma ade sa koraa. Ofie bi a yɛkɔsoɛɛ mu de, na awarefo no da ɔdan no fã biako ɛnna yɛn nso yɛda ɔfã biako. Awarefo no bisaa nsɛm pii, enti yɛbɔɔ Bible mu nkɔmmɔ araa kosii anadwo dasum.
ASƐNKA MU ANIGYE
Lapland yɛ baabi a ɛhɔ yɛ fɛ; ɔhyew bere oo, awɔw bere oo, biribi wɔ hɔ a ɛma hɔ yɛ fɛ. Nanso ade a na ɛyɛ yɛn fɛ paa ne sɛnea nkurɔfo tie Yehowa asɛm no. Yedii nnipa komapafo pii adanse wɔ Lapland. Wɔn mu bi ne mmarima a na wɔaba hɔ rebetwa nnua. Ɛtɔ da a, yebepue akuraa bi ase no, na mmarima akantinka pii wɔ hɔ. Nanso wɔtew wɔn anim tie Bible mu asɛm gye nhoma ahorow.
Yenyaa osuahu pii a ɛyɛ anika. Da bi na yɛrekɔ akɔfa bɔs akɔyɛ asɛnka adwuma wɔ akuraa bi ase, nanso yeduu hɔ no, na bɔs no atu. Nea yehui ne sɛ na wɔɔkye a ɛbɔ bɔs gyinabea hɔ no kɔ ntɛm kakra. Enti yɛyɛe sɛ yɛbɛfa bɔs foforo akɔ akuraa foforo ase. Ná yɛnkɔɔ hɔ da. Ofie a yedii kan wuraa mu no, yɛkɔtoo ababaa bi wɔ hɔ. Ɔkae sɛ, “Ei, mo ara na merehwɛ mo kwan.” Na yɛne ne nuabea panyin sua Bible, na na ababaa a yɛkɔtoo no yi aka akyerɛ ne nua panyin no sɛ ɔnka nkyerɛ yɛn na yɛmmra ne hɔ saa da no. Enti na onim sɛ yɛanya nkra no nti na yɛaba, nanso asɛm no ne sɛ yɛn nsa anka nkra no. Yɛne no fii ase suaa Bible, na akyiri yi yɛne n’abusuafo bi a wɔte bɛn hɔ nso fii ase suaa ade. Nanso eduu baabi no, yɛkaa wɔn nyinaa boom ne wɔn suaa ade. Na wɔyɛ nnipa dumien. Efi saa bere no, saa abusua yi mufo pii abɛyɛ Yehowa Adansefo.
Seesei yɛaba Arctic Circle anafo; yɛwɔ Kuusamo asafo mu. Afe 1965 mu na woyii yɛn baa hɔ. Saa bere no, na adawurubɔfo kakraa bi na wɔwɔ asafo no mu. Mfiase no na asɛnka adwuma no yɛ den wɔ ha. Na nkurɔfo no som adi wɔn ti, enti na wonni yɛn ho adwempa. Nanso na wɔn mu pii bu Bible no. Enti nkakrankakra yehuu nea wɔn ani gye ho ne nneɛma a yebetumi ne wɔn abɔ ho nkɔmmɔ. Mfe abien akyi no, na ɛnyɛ den sɛ yɛne wɔn befi Bible adesua ase.
YEGU SO REYƐ ASƐNKA ADWUMA NO DENNEENNEN
Wɔn a yɛne wɔn suaa ade no bi
Seesei yenni ahoɔden sɛ kan no enti yentumi nkyɛ wɔ asɛnka mu, nanso ɛkame ayɛ sɛ da biara yɛkɔ asɛnka. Yɛn asasesin no sõ nanso ɛnyɛ den sɛ yɛbɛka asɛm no wɔ baabiara efisɛ Aili asua karka. Yɛn nuabarima ba na ɔhyɛɛ no nkuran sɛ onsua karka; enti 1987 mu na ogyee tumi krataa a ɔde ka kar. Saa bere no na wadi mfe 56. Seesei wɔasi Ahenni Asa foforo ama yɛn. Wosii dan bi bataa Ahenni Asa no ho, na emu na yɛte.
Nnipa pii agye nokware no wɔ Finland atifi fam; eyi ma yɛn ani gye paa. Bere a yefii bere nyinaa som adwuma no ase wɔ hɔ no, na adawurubɔfo kakraa bi na wɔwɔ asasesin kɛse no nyinaa mu. Ɛnnɛ, yɛanya ɔmansin a asafo pii wom. Sɛ yɛkɔ ɔmansin anaa ɔmantam nhyiam a, wobɛhwɛ na obi aba yɛn nkyɛn abebisa yɛn sɛ yɛkae no anaa. Ebinom wɔ hɔ a, bere a wɔyɛ mmofra no, na yɛne nkurɔfo sua Bible wɔ wɔn fie. Aba a yegui mfe pii a atwam no asow bebree.—1 Kor. 3:6.
Osu retɔ mpo a, yɛkɔ asɛnka
Eduu afe 2008 no, na yɛde mfe 50 ayɛ akwampaefo titiriw. Yɛda Yehowa ase sɛ waboa yɛn ma yɛn mu biara ahyɛ ne yɔnko nkuran ma yegu so ara resom no. Yɛayɛ yɛn ho awiɛmfoɔ nanso yenya nea yehia biara. (Dw. 23:1) Afei na yɛahu sɛ mfiase no na anka ɛnsɛ sɛ yedwinnwen haw yɛn ho koraa! Mfe pii a yɛde ayɛ asɛnka adwuma yi nyinaa, ade biako a ahyɛ yɛn mpamden ne asɛm a Yehowa aka wɔ Yesaia 41:10 yi: “Mɛhyɛ wo den. Mɛboa wo. Mede me trenee nsa nifa beso wo mu denneennen.”
Share Share Yɛde Mfe 50 Ayɛ Bere Nyinaa Som Adwuma wɔ Finland Atifi Fam